Wararkii ugu dambeeyay ee Caalamka iyo Warqabadka SBC International. – SBC
Wararkii ugu dambeeyay ee Caalamka iyo Warqabadka SBC International.
Masar oo u fureysa macbarka Rafax si joogta ah
Cairo:-Wakaaladda wararka bariga dhexe ahna wakaalada wararka rasmiga ah ee dowladda masar ayaa sheegtay in Macbarka Rafax si joogta ah loogu furi doono filistiiniyiinta laga bilaabo sabtiga soo socoto 09:00 subaxnimo ilamaa 05:00 galabnimo marka laga reebo maalmaha jimcaha iyo maalmaha fasaxyada rasmiga ah ee dalka Masar.
Waana talaabo ka fududeyn doonta filistiiniyiinta dhibaatada ka haysata go’doonka Yuhuudu ku soo rogtay marinka Gaza.
Wakaaladda wararka rasmiga dalka Masar oo soo xignaysa golaha melateriga ee haya talada dalka Masar ayaa sheegtay in goluhu ay jaan gooyeyeen taariikhda furitaanka macbarka Rafax si loo xoojiyo dadaalka loogu jiro in la soo afjaro kala qeybsanaanta filistiiniyiinta.
Qaraarkan oo hergeli doona laga bilaabo 27 may ayaa dhigaya in lagu dhaqmo xeer horey u degsanaa sanaddii 2007 oo ahaa in laga dhaafo shuruudaha helitaanka Visaha dhamaan haweenka iyo raga da’doodu ka yar tahay 18 jirka iyo kuwa kor u dhaafay 40 jir iyo kuwa u imanaya in ay masar wax ka bartaan islamarkaana ka haysta shahaadooyin lagu kalsoon yahay jaamacadaha dalka Masar.
Dhanka kale Israel ayaa carabaabtay sida ay uga xuntahay go’aanka Masar ay si joogto ah ugu fureyso macbarka Rafax kaasi oo soo gabagabeenaya go’doonka ay Israel ku hayso shacabka ku nool Gaza.
Heshiis la saxiixay 2005 kadib ka bixitaankii Israel Gaza ayaa dhigayey in macbarka Rafax uu noqdo mid furan iyadoo midowga Yurub uu korjooge ka noqonayo.
Balse macbarka Rafax ayaa noqday mid xiran kagadaal markii ay Yuhuudu ku soo rogtay go’doon joogta ah kadib markii ay dagaal yahanada filistiiniyiinta ay afduubeen askari Israeli ah oo lagu magacaabo Galcaad Shaliid, kaasi oo ilaa iyo hadda kujira gacanta dagaal yahannada filistiiniyiinta.
Qaraarkan ayaa muujinaya isbedelka siyaasadeed ee dalka Masar kadib markii xilka laga tuuray Xusni Mubaarak, kaasi oo xukuumadiisu iskaashi kala lahayd Yuhuuda go’doonkii ay ku soo rogtay marinka Gaza ee ay maamusho xarakada Xamaas.
Masar ma aysan ahayn mid furta macbarka Rafax xilligii Mubaarak marka laga reebo mar mar ay u ogolaato in laga gudbiyo daawooyinka iyo cuntada ama in ay ka gudbaan shakhsiyaat u badan dad caafimaad u socda .
Musharaf oo sheegay in sirdoonka Pakistan aysan kulugu lahayn joogitaankii hogaamiyihii Al-qaacidda dhulka Pakistan
London:- Madaxweynihii hore ee dalka Pakistan Perfez Musharraf oo u warmayey kanaalka labaad ee BBC-da ayaa sheegay in sirdoonka Pakistan ee marka magaciisa la soo gaabiyo loo yaqaan (ISI)uu ka gaabiyey raadinta halka uu hogaamiyihii Al-qaacidda Osama Bin Laden ku dhuumaaleysanayey ee deegaanka Abut Abaad.
Musharraf waxa uu ku gacan seeray in sirdoonka Pakistan uu wax ka ogaa joogitaanka hogaamiyihii Al-qaacidda dalka Pakistan.
Xukuumadda mareykanka ayaa sheegtay in Osama Bin Laden uu degnaa deegaanka Abut Abaad in kabadan 5 sano ka hor inta aan la dilin horaantii bishaan May.
Washington ayaa sheegtay in suurtagal aysan ahayn in ninkii loogu doonitaanka badnaa caalamka in uu ku noolaado deegaan uu ku yaal saldhig milatari haddii uusan gacan ka helayn maamulka Pakistan.
Mareykanka ayaa aaminsan in xubno kujira sirdoonka Pakistan in ay xiriir la leeyihiin kooxaha hubaysan , kuwaasi oo wax ka ogaa halka uu ku noolaa hogaamiyihii Alqaacidda Osma Bin Laden .
Musharraf ayaa carabaaby in uu aad oga xumaaday markii uu maqlay in Osama uu deganaa deegaanka Abut Abaad ee u jirta masaafo dhan 60 km caasimadda Pakistan ee Islamabad.
Musharraf ayaa ku adkeesanaya in isga iyo mas’uuliyiintii maamulkiisa xilligii uu madaxweynaha ahaa inta u dhexeysay sanadihii 1999-2007 in aysan wax ka ogeyn joogitaan hogaamiyihii Alqaacidda dalka Pakistan.
Musharraf oo wareysigiisu dhinacyo badan taabanayey ayaa cambaareeyey xukuumadda mareykanka ee uu ku sheegay in xiriirka Pakistan ay ka jeceshahay xiriirka India.
Musharaf oo ahaa madaxweynihii hore ee dalka Pakistan ayaa inqilaab milatari kula wareegay xukunka dalkaas sanaddii 1999.
Nasrallah oo ugu baaqay muwaadiniinta Syria in ay garab istaagaan madaxweyne Bashaar Al-asad
Beirut:- Xoghayaha guud ee ururka Xisbullah Sheekh Xasan Nasarallah oo khudbad u jeedinayey kumaan kun oo taageeryaashiisa deegaanka Biqaac dabaal daga 11 sano guuradii ka soo wareegatay ka bixitaanka ciidamada Israel koonfurta Lubnaan ayaa sheegay in madaxweynaha mareykanka Brack Obama iyo ra’iisal wasaaraha Yuhuuda Binyamiin Nitanyahu in ay baalmareen dadaalkii dowladaha carbeed ay ku donayeen in bariga dhexe nabad lagu soo dabaalo gaar ahaan talo soo jeedintii dowladda sucuudiga sanadii 2002.
Sheekh Nasrallah ayaa ka codsaday jaamacadda carabta in ay ka laabato waan waantii dalalka carbeed si jawaab ay ugu noqoto Obama iyo Nitanyahu.
Dhanka kale sheekh Nasrallah ayaa ugu baaqay muwaadiniinta Syria in ay isgarab taagaan dalkooda iyo waxa uu ugu yeeray nidaamkooda ku dhisan wax iskaa caabinta iyo dulmi diidka.
Sidoo kale Nasrallah ayaa ka dalbaday shacabka Syria in ay siiyaan hogaankooda waqti si uu u meel mariyo isbedelada uu maamulku ka dhawaaqay.
Nasrallah ayaa tilmaamay in waxa u dhexeeya dalka Syria iyo dalalka kale ee carabta ee ay ka socdaan dhaqdhaqaaqyada isbedel doonka in maamulada sida Baxreyn oo kale in aysan ku qanacsanayan in ay isbedel sameeyaan halka madaxweyne Bashaar Al-asad iyo Syria uu aaminsan yahay isbedel dhab ah uuna diyaar u yahay in uu sameeyo talaabooyin intaas kabadan.
Sheekh Nasrallah ayaa ugu dambayn ugu baaqay Lubnaan in ay ka hor timaado wax kasta oo lagu waxyeeleenayo walaalahood Syria gaar ahaan hadii ay reer galbeedku ka codsadaan Lubnaan in ay hergeliso cunaqabatayn la saaro Syria.
Zuuma oo la filayo in toddobaadka soo socda uu booqasho ku tago dalka Libya
Johannesburg:- Xukuumadda koonfur Africa ayaa shaaca ka qaaday in madaxweyne Jaakob Zuma uu u safri doono magaalada Tripoli ee xarunta dalka Libya si uu ula kulmo dhigiisa dalkaas Mucammar Al-qadaafi.
Dhanka kale wasiirka arrimaha dibadda xukuumadda Russia ninka lagu magcaabo Serjey Lafaroof ayaa ku tilmaamay Waxa kasocda wadanka Liibiya in ay tahay wax khilaafsan Qaraarkii UN ka ee tirsigiisu ahaa 1970-1973 ee ahayd in cuna qabateyn hawada laga saaro wadanka Liibiya iyo in ciidamada laga ilaaliyo dadka rayidka ah ee ka soo jeeda dhinaca falaagada.
Dadka indha indheeya siyaasadda ayaa aaminsan in dagaalka ka socda dalka Liibiya uu u muuqdo mid lugaha la sii galaya dagaal sokeeyey.
Sidoo kale dalalka ku yaal maqrib alcarabi ayaa aaminsan in dagaalada ka socda libya ay sababi karaan in gobolka oo dhan uu galo dagaal sokeeye iyo in wadamada maqribka loo yaqaan qas lagaliyo..
Wasiirka arrimaha dibadda Britain William Heeg ayaa amaanay kaalinta xukuumadda mareykanka howlgalada milatari ee dalka Libya, wuxuuna tilmaamay in diyaaradaha dagaalka mareykanka ay 25% ay ka qeyb qaateen weerarada cirka ee lagu beegsanayo Qadaafi iyo ciidankiisa.
QM oo cambaareesay siyaasadda Australia ee ku aadan dadka magangelye doonka ah
New York:- u qeybsanaha QM xuquul Insaanka haweenayda lagu magcaabo Naafi Bilaay ayaa weerar afka ah ku qaaday xukuumadda Australia sababo la xiriira siyaasada Australia ee ku waajahan soo galootiga iyo muwaadiniinta aslaka ah.
Bilaay ayaa tilmaamtay in hab dhaqanka Australia ee ku aadan qaxootiga in uusan waafaqsanayn heerka Australia ay uga jirto dhanka xuquuqda aadanaha.
Xukuumadda Australia ayaanan wax warbixin ah ka soo saarin eedeemaha ay QM u soo jeedisay.
Tani waa markii labaad ee maalmo gudahood ay haweenayda u qaabilsan QM arrimaha xuquuqul Insaanka ay si toos ah ay eedeen kulul ugu jeedinayso xukuumadda Australia siyaasadeeda ku aadan dadka magangleye doonka ah.
Bilaay ayaa gaarsiisay ra’iisal wasaaraha dalka Australia haweenayda lagu magcaabo Julia Gillard in qabqabashada ay lakulmayaan dadka soo galootga ah ay tahay mid wax yeeleen karta heerka dowladda Australia uga jirto dhanka xuquuqda aadanaha.
Bilaay ayaa carabaabtay in rag , dumar iyo caruur ay xirxirtay dowladda Australia iyagoo aan wax dambi ah gelin.
Bilaay ayaa ku nuuxnuuxsatay in dadka asal ahaan degnaa Australia loola dhaqmo si aan haboonayn taasi oo ah mid ku reebaysa qofkatsa xanuun islamarkaan ka hor imanaysa qaanuunka caaliga ah ee arrimaha qaxootiga.
Bilaay ayaa isweydiisay xeerka ay Australia u cuskatay in 800 oo qaxooti ah in doon lagu guro oo dib loogu celiyo dalka Malaysia oo kamid ah dalalka aan saxiixin heshiiska QM ee qaxootiga.